Blackmagic ဒီဇိုင်းသည် Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K အသစ်ကိုကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Blackmagic ဒီဇိုင်းသစ် Blackmagic Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 6K ကြေညာ
Blackmagic ဒီဇိုင်းသစ် Blackmagic Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 6K ကြေညာ
Fremont, CA, USA သို့ - ကြာသပတေးနေ့, 8 သြဂုတ်လ 2019 - Blackmagic ဒီဇိုင်း ယနေ့ Blackmagic Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 6K, 35 dynamic range ကို၏ရပ်အပြည့်အဝစူပါ6အရွယ်အစား 13K HDR ပုံရိပ်အာရုံခံကိရိယာနှင့်အတူသစ်တစ်ခုလက်ကိုင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ကင်မရာကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်တစ်ခု EF မှန်ဘီလူးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အနိမ့်အလင်းစွမ်းဆောင်မှုများအတွက် 25,600 မှတက် mount နှင့် dual-ဇာတိက ISO ။ ယခုအသစ်မော်ဒယ် Blackmagic Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 4K ၏ကျော်ကြားမှုအပေါ်တည်ဆောက်ဒါပေမယ့် 35K resolution နဲ့ပိုကြီးတဲ့စူပါ6အာရုံခံကိရိယာအရွယ်အစားရှိပါတယ်, မြင့်မားသောပုံရိပ်အရည်အသွေးခွင့်ပြု။ အဆိုပါ EF မှန်ဘီလူးပုံစံကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများအထဲကနေမှန်ဘီလူး၏ကျယ်ပြန့အတူအလုပ်လုပ်တယ် mount ကို Canon, Zeiss, Sigma နှင့် Schneider ။
Blackmagic Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 6K ကနေချက်ချင်းရရှိနိုင် Blackmagic ဒီဇိုင်း အမေရိကန် $ 2,495 များအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပြန်လည်ရောင်းချသူများ။
အဆိုပါ Blackmagic Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ၏ကြော့ဒီဇိုင်းကိုမြင့်မားတဲ့အဆုံးဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်တစ်ခုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အရေအတွက်သည်တစ်ဦးသေးသေးလေး, လက်ကိုင်ဒီဇိုင်းသို့ features pack မှာ။ ပေါ့ပါးကာဗွန်ဖိုင်ဘာ polycarbonate ပေါင်းစပ်ရာမှ လုပ်. , ကင်မရာညာဘက်၎င်းတို့၏လက်ချောင်းထိပ်မှာအသံဖမ်း, က ISO, WB နှင့်ရှပ်ထောင့်အဘို့အားလုံးထိန်းချုပ်မှုနဲ့ဘက်စုံသုံး handgrip ပါရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးအဆင့်မြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ကင်မရာကိုဖွင့်သောကြောင့်, အာရုံခံသန့်စင်မှောင်မိုက်အရိပ်နှင့်အဆင့်မြင့်သော ISO ခွင့်ပြုအပူဆူညံသံကိုလျှော့ချဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Plus အားကြီး5လက်မ LCD ကို 4K နှင့် 6K ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာပြီးပြည့်စုံသောအာရုံရဖို့ဖြစ်နိုင်စေသည်။
ပိုကြီးတဲ့ 6144 3456 စူပါ 35 sensor နဲ့ EF မှန်ဘီလူး mount x featuring, အ Blackmagic Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 6K ဖောက်သည်ဖန်တီးမှု defocussed နောက်ခံနဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ bokeh သက်ရောက်မှုခွင့် field ရဲ့တိမ်တိမ်အနက်နှင့်အတူရုပ်ရှင်ပုံရိပ်တွေကိုဖန်တီးရန်ပိုမိုကြီးမား EF ဓာတ်ပုံပြပွဲမျက်ကပ်မှန်ကိုအသုံးပြုထားတယ်။ ဤသည်ဖောက်သည် 6K အတွက်ရိုက်ကူးနိုင်သည်, ပြီးတော့ post ကိုထုတ်လုပ်မှု zoom ကိုနှင့် re-frame ကိုအားလုံးကိုတစ်ခုတည်းကိုကင်မရာကနေနှင့်ပုံရိပ်အရည်အသွေးဆုံးရှုံးခြင်းမရှိဘဲ, ကျယ်ပြန့်ရိုက်ချက်များနှင့်နီးစပ် ups ဖန်တီးခံရဖို့ခွင့်ပြုဆိုလိုသည်။
Blackmagic Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 4K နှင့် 6K နှစ်ဦးစလုံးရိုးရှင်းသောဗီဒီယိုကင်မရာများတတ်နိုင်သမျှထက်သူတို့ပုံတစ်ပုံ၏ပေါ့ပါးဆုံးနှင့်အမှောင်ဒေသများတွင်ပိုမိုအသေးစိတ်ကိုထိန်းသိမ်းဆိုလိုတာက dynamic range ကိုတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် 13 မှတ်တိုင်များရှိသည်။ ဤသည်ဖောက်သည်ထိုကဲ့သို့သောကဖေးအဖြစ်မိုးလုံလေလုံမြင်ကွင်းတစ်ခုများအတွက်ထိတွေ့သတ်မှတ်ထားဆဲပြတင်းပေါက်မှတဆင့်လာမယ့်တောက်ပပြင်ပအလင်း၏အသေးစိတျကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဖောက်သည်ကိုပင်အင်္ဂါရပ်ဇာတ်ကားတွေအတွက်အသုံးပြုစံ DCI-P3 colorspace ထက်ပိုအရောင်များကိုရယူပါ။
အဆိုပါ Blackmagic Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာနှစ်ခုလုံး 25,600K နှင့် 4K မော်ဒယ်များအာရုံခံကိရိယာ၏အပြည့်အဝ dynamic range ကိုထိန်းသိမ်းနေချိန်တွင်, ရုပ်ပုံများ၌စပါးသို့မဟုတ်ဆူညံသံ minimize လုပ်ဖို့ optimized နေကြသည်ဆိုလိုတာက 6, မှတက် dual-အမြတ်က ISO ပါရှိပါတယ်။ 400 ၏ဇာတိက ISO အပေါ်-set ကိုအလင်းရောင်နှင့်အတူမြင်ကွင်းများများအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်။ အမြတ်လည်းသူတို့ကကင်မရာကိုအပေါ်က ISO setting ကိုချိန်ညှိအဖြစ်အလိုအလျောက်သတ်မှတ်, ဒါသူတို့အလင်းအိမ် set up လုပ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးအခါကြီးမြတ်ပုံရိပ်တွေကိုဖမ်းယူဖို့လွယ်ကူသည်။
အသစ် 6K မော်ဒယ် 50 မှာ 6144 fps အထိရိုက်ကူးဦးမည် 3456 16 x:9မှာ 60 သို့မဟုတ် 6144 fps 2560 2.4 x: 1 မှာ 60 နှင့် 5744 fps 3024 17 x:9။ 120: သူတို့င်းဒိုးဟာအာရုံခံနိုင်မြင့်မားသည် frame နှုန်းအဘို့နှင့် 2.8K 2868 မှာ 1512 fps အထိရိုက်ကူး 179x ။ ဖောက်သည်ကိုတောင်စစ်မှန်တဲ့ anamorphic6အလုပ်လုပ်နိုင်သည်5မှာ 3.7K 60 fps အတွက် anamorphic မှန်ဘီလူးကို အသုံးပြု. 3728 3104 x ။
ဖောက်သည်အချိန် transcoding မီဒီယာဖြုန်းရန်မလိုပါဒီတော့စံပွင့်လင်းဖိုင် Format ကို အသုံးပြု. Blackmagic Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာမှတ်တမ်းများ။ 10K အားလုံးကိုပုံစံများထကျ၌ထ 4K သို့မဟုတ် 12-bit မှာ Blackmagic RAW အားလုံးကိုပုံစံများဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းစံ 6-bit မှာ Apple က ProRes ဖိုင်တွေအတွက်အကျင့်ကိုကျင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။ ဖိုင်တွေအားလုံး operating systems ပေါင်းဖောက်သည်အပေါ်အလုပ်လုပ်ဖို့အားလုံးမီဒီယာများ၏အကောင်းဆုံး Windows အတွက် Mac နှင့် ExFAT များအတွက် HFS + မီဒီယာကတ်များနှင့် disk တွေကို format နိုင်ပါတယ်။
CFast နဲ့ SD UHS-II ကိုကဒ်အသံဖမျး built-in the Blackmagic Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ features တွေနှင့်ပြင်ပမီဒီယာ disk ကိုတိုက်ရိုက်မှတ်တမ်းတင်ဘို့ကို USB-C ကိုတိုးချဲ့ဆိပ်ကမ်းကို။ ဖောက်သည်များအတွက်ပုံမှန် SD ကဒ်များကိုသုံးနိုင်သည် HD သို့မဟုတ် Blackmagic RAW တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါဇာတိ 4K သို့မဟုတ် 6K များအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် UHS-II နှင့် CFast ကတ်များ။ တစ်ခုတည်း 6GB SD က UHS-II ကိုကဒ်အပေါ်အပြည့်အဝ resolution ကို 256K ပုံရိပ်တွေ၏တစ်နာရီကျော်ဖမ်းယူဆိုပါစို့။
Blackmagic RAW သူတို့ရဲ့ကင်မရာကိုကနေအာရုံခံကိရိယာအချက်အလက်များ၏အရည်အသွေးဖမ်းယူခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ဒီဇိုင်းတစ်ခုတော်လှန်ရေးသစ်ကိုပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော H.264 အဖြစ်ဗီဒီယိုကိုကို formats အလွန်အမင်းချုံ့ဖြစ်ကြသည်ပေါင်းအစဉ်အမြဲရှုံးနိမ့်ခံရဖို့မူလကအာရုံခံကိရိယာအသေးစိတ်ဖြစ်ပေါ်စေဆူညံသံများနှင့်လိုက်တယ်အပိုငျးအချက်ထည့်ပါ။ Blackmagic RAW ဤပြဿနာကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်, အရောင်နဲ့ Master တည်းဖြတ်ရန်ကင်မရာကိုအနေဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုပိုက်လိုင်းတလျှောက်လုံးသူတို့ကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အသေးစိတ်များနှင့်အရောင်နှင့်အတူရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပုံရိပ်တွေကိုပေးတော်မူ၏။ ဒါဟာအစကိုတည်းဖြတ်စဉ်တွင်ဖောက်သည်အားလုံးအရည်အသွေးမဆိုအရှုံးမရှိဘဲ, ကင်မရာထဲမှာအဖြူချိန်ခွင်လျှာနှင့်ထိတွေ့မှုက ISO set သို့မဟုတ်နောက်မှသူတို့ကိုထပ်ရေးနိုင်ပါသည်ဒါကြောင့် metadata ကိုအဖြစ်ကင်မရာဆက်တင်များကယ်တင်တော်မူ၏။ Blackmagic RAW file တွေကိုလည်းအတူလုပ်ကိုင်ဖို့သူတို့ကိုလွယ်ကူသောအောင်သုံးစွဲဖို့အသေးစားနှင့်အစာရှောင်ကြသည်။
အဆိုပါ Blackmagic Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ၏နောက်ဘက်ကလွယ်ကူဖောက်သည်ရိုက်ချက်များဘောင်များနှင့်တိကျစွာအာရုံစူးစိုက်ရန်အဘို့အကိုတစ်ဦးကြီးများ, တောက်ပ5လက်မအရွယ် touchscreen ပါရှိပါတယ်။ ဒါဟာ Blackmagic ဗီဒီယို built-in တစ်ခုကသူတို့ကကင်မရာနှင့်အတူ Assist လာပြီနဲ့တူရဲ့။ touchscreen ကရိုက်ကူးနေစဉ်တွင်အရေးပါသတင်းအချက်အလက်များဖော်ပြပေးအဖြစ်ထိန်းချုပ်မှုအာရုံစိုက်ဖို့ကင်မရာနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ထိတွေ့တက် setting များအတွက် menus တွေ။ မျက်နှာပြင်တွင်ထပ် status ကိုတစ်ဦး Histogram, အာရုံနှင့် peaking ညွှန်းကိန်း, အဆင့်ဆင့်, frame ကိုလမ်းပြသောပြန်ဖွင်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပိုပြီးပြသပါ။
အဆိုပါအဆင့်မြင့် Blackmagic OS ကိုနှင့်အတူဖောက်သည်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာအပေါ်အခြေခံတစ်ခုအလိုလိုသိနှင့်အသုံးပြုသူဖော်ရွေကင်မရာ operating system ကိုရယူပါ။ အဆိုပါ interface ကို metadata ကိုနှင့်အမြင်မှတ်တမ်းတင် status ကို add, settings ကိုထိန်းညှိဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ကိုထိပုတ်ပါနဲ့ပွတ်ဆွဲအမူအရာကိုအသုံးပြုသည်။ ဖောက်သည်များမှာလည်းထိုကဲ့သို့သောမျက်နှာပြင်အာရုံနှင့်ထိတွေ့မှုကိရိယာများ, 3D LUTs, HDR, metadata ကို entry ကို, timecode, Blackmagic RAW settings ကိုနှင့်ပိုပြီးအပေါ်အဖြစ်အဆင့်မြင့်ကင်မရာ features တွေကျော်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ရ။
အမြင့်ဆုံးသောအဆုံး URSA Mini ကို Pro ကို G4 ကဲ့သို့တူညီသောမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ2အရောင်သိပ္ပံ featuring က, Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာတိုင်းရိုက်ချက်အတွက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်, တိကျအသားအရေတန်ချိန်နှင့်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံအရောင်ကယ်တင်တတ်၏။ Blackmagic မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ4အရောင်သိပ္ပံ Highlights ကိုများနှင့်မှောင်မိုက်အရိပ်တွင်ပိုမိုအရောင် data တွေကိုဖမ်းယူဖို့စီစဉ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ရှုပ်ထွေးပြောင်းလဲနေသော 12-bit မှာ gamma ကွေးကိုအသုံးပြုသည်, ဒါကြောင့်သူတို့ကပိုကောင်းရှာဖွေနေပုံရိပ်တွေရ။ အရောင်သိပ္ပံကိုလည်းရှုပ်ထွေး Blackmagic RAW image processing တွင်အချို့ကိုကိုင်တွယ်ဒါအာရုံခံကိရိယာကနေအရောင်နဲ့ dynamic range ကိုဒေတာဖောက်သည် post ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်သုံးနိုငျရာ metadata ကိုမှတဆင့်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
အဆိုပါကင်မရာကိုအပြည့်အဝအရွယ်အစားလည်းပါဝင်သည် HDMI HDR နှင့်သန့်ရှင်းသော 10-bit မှာ output ကိုများအတွက်အထောက်အပံ့ဖြင့်စောင့်ကြည့်ဘို့ connector ကို။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိုက်ခရိုဖုန်းပူးတွဲများအတွက် 48 ဗို့ Phantom ပါဝါနဲ့ mini ကို XLR ကွန်နက်ရှင်တစ် 3.5 မီလီမီတာဗီဒီယိုကင်မရာစတိုင်မိုက်ခရိုဖုန်း input ကို, နားကြပ်ကွန်နက်ရှင်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သော့ခတ် DC ကအာဏာကို connector ကိုလည်းရှိပါတယ်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ကင်မရာသို့သော်ဤဖိုင်များကိုသူတို့အပြားကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဆေးကြောနိုင်ပါတယ်တဲ့ Monitor ပေါ်မှာကြည့်ရှုအားပေးကြသည်အခါ, နောက်ပိုင်းမှာ post ကိုထုတ်လုပ်မှုအဘို့ကြီးသောသော dynamic range ကို, ထိန်းသိမ်းလော်ဂရစ်သမ် colorspace shoot ။ သူတို့ဖောက်သည်များဖောက်သည်များအချောပုံရိပ်တွေကိုတည်းဖြတ်သည့်အခါများကဲ့သို့ကြည့်ရှုမည်မည်သို့စိတ်ကူးတစ်ခုရနိုင်အောင်တစ်မော်နီတာရန် "ကိုကြည့်" လျှောက်ထားရန်ခွင့်ပြုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ 3D LUTs ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်း။ အဆိုပါ Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 17D LUT ဖိုင်များ, သို့မဟုတ်ဖောက်သည် LUTs built-in ထိုကဲ့သို့သော Rec.33 မှဗီဒီယို, ရုပ်ရှင်ဗီဒီယို, ရုပ်ရှင်တိုးချဲ့နှင့်ပိုပြီးအဖြစ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်စက်မှုလုပ်ငန်းစံ3နှင့် 2020 အချက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကင်မရာများစုံလင်သောထပ်တူပြုခြင်းကိုစောင့်ရှောက်စဉ်တစ်ခုထက် ပို. ကင်မရာရိုက်ကူးခွင့်ကိုလည်း timecode မီးစက်တည်ဆောက်ရပရော်ဖက်ရှင်နယ် features နဲ့ဖောက်သည်များပါဝင်သည်။ ရိုးရှင်းစွာ 3.5 မီလီမီတာ audio jack သို့ထိုကဲ့သို့သော Tentacle Sync ကိုအဖြစ်ပြင်ပ timecode မီးစက်အတွက် plug နှင့်ကင်မရာကိုအလိုအလျောက် timecode detect နှင့်ပြည်တွင်းရေးမီးစက်သော့ခတ်ပါလိမ့်မယ်။ အခုတော့တစ်ဦးချင်းစီကကင်မရာစတင်မှတ်တမ်းတင်ရပ်တန့်အပေါင်းတို့နှင့်ကင်မရာများကနေအပေါငျးတို့သရိုက်ချက်များအတူတူပင်လိုက်ဖက် timecode ရပါလိမ့်မယ်နိုငျသညျ။ မျိုးစုံ roving ကင်မရာများနဲ့ဂီတပွဲတော်မှာရိုက်ကူးဆိုပါစို့။ အားလုံးအသစ်က DaVinci ၏အကောင်းဆုံးသူတို့ရိုက်ချက်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏မှတဆင့် sorting အချိန်ဖြုန်းဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဒါကြောင့် 16.1 အလိုအလျှောက်အားလုံးကင်မရာကနေရိုက်ချက်များရှာဖွေတိုက်ဆိုင်ညှိယူကြလိမ့်မည်ဖြေရှင်း။
အဆိုပါ Blackmagic Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာစံဖြုတ် LP-E6 အမျိုးအစားဘက်ထရီကိုအသုံးပြုသည်နှင့်လည်းသူတို့တစ်တွေရိုက်ကူးအလယ်၌အာဏာကိုဆုံးရှုံးစိုးရိမ်ရန်ရှိသည်ဘယ်တော့မှဒီတော့တစ်သော့ခတ် DC ကအာဏာကို connector ကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ အဆိုပါထည့်သွင်း AC အ plug ကို pack ကိုကင်မရာပါဝါနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာဘက်ထရီအားသွင်းနိုင်ပါတယ်။ USB-C ကိုတိုးချဲ့ဆိပ်ကမ်းကိုလည်းခရီးဆောင်ဘက်ထရီထုပ်, မိုဘိုင်းဖုန်းကိုအားသွင်းဒါမှမဟုတ် Laptop ကိုကွန်ပျူတာကနေဘက်ထရီကိုအားသွင်းဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဖောက်သည်များပင်ဖောက်သည်သိသိသာသာကင်မရာ၏တန်ခိုးချဲ့ထွင်ဖို့2ဘက်ထရီကိုအသုံးပြုထားတယ်တစ်ခု optional ကို Blackmagic Pocket ဘက်ထရီဆုပ်ကိုင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
Blackmagic Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 4K နှင့် 6K မော်ဒယ်များ DaVinci တစ်ဦးအပြည့်အဝဗားရှင်းပါဝင်သည်များတွင်အသုံးပြုအတူတူဆော့ဖျဝဲဖြစ်သောစတူဒီယို, ဖြေရှင်း ဟောလိဝုဒ် မြင့်မားတဲ့အဆုံးအင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်, Episode ရုပ်မြင်သံကြားရှိုးများ, ကြော်ငြာနှင့်ပိုပြီးဖန်တီး။ DaVinci ဖြေရှင်းရန်အသိဉာဏ်တည်းဖြတ်ရေးကိရိယာများနှင့်ဖောက်သည်များလျင်မြန်စွာအတူတူနှင့်အထွက်ကအစာရှောင်ခြင်းကြောင့်တည်းဖြတ်, ဖောက်သည်များချင်သောဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကူညီရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်သော features အသစ်နှင့်အတူတော်လှန်ရေးသစ်ကိုဖြတ်စာမျက်နှာပါရှိပါတယ်။ အသစ်ကဖြတ်စာမျက်နှာအပြင်, ဖောက်သည်များမှာလည်းအားလုံးတစ်ခုတည်းဆော့ဖ်ဝဲ application အတွက် DaVinci ရဲ့ဒဏ္ဍာရီပရော်ဖက်ရှင်နယ်တည်းဖြတ်ရေး, အဆင့်မြင့်အရောင်ဆုံးမခြင်း, အသံ post ကိုနှင့်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု tools များရရှိမည်ဖြစ်သည်။
"ဒီ Blackmagic Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 6K မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သစ်ကို 6K ပုံရိပ်နှင့် EF မှန်ဘီလူးဖောက်သည်အဘို့တောင်းလျှောက်ကြပြီကိုထောကျပံ့ features" Grant ကအသေးသုံးငွေကပြောသည် Blackmagic ဒီဇိုင်း စီအီးအို။ "ဒါဟာဖောက်သည် 4K မော်ဒယ်ကနေကိုချစ်ကြီးစွာသောအင်္ဂါရပ်များအားလုံးရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ယခုတစ် EF မှန်ဘီလူးကထပ်ပြောသည်, ပင်အရည်အသွေးမြင့်မားပုံရိပ်တွေနှင့်ပိုပြီးအဘို့အ 6K resolution ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ Plus အား, ထို features တွေ Assist ဗီဒီယို built-in အတူဖောက်သည်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်အပိုပစ္စည်းကိရိယာများန်းကျင်သယ်ဆောင်ရန်မလိုပါ။ DaVinci စတူဒီယိုဖြေရှင်းကိုလည်းမည်သူမဆိုဖန်တီးမှုဖြစ်နှင့်တစ်ဦးပုံပြင်ပြောပြရန်ဖွတစ်ခုဖြေရှင်းချက်အားလုံးကိုကြောင့်တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပဲပါဝင်သည်။ "
Blackmagic Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 6K အင်္ဂါရပ်များ
လွတ်လပ်သောရုပ်ရှင်, မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်, ဘလော့ဂ်များနှင့်ပိုပြီးများအတွက်သုံးပါ။
ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ polycarbonate ပေါင်းစပ်ရာမှဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။
2 မှာ 6K နှင့်အတူ 6144 မော်ဒယ်များ 3456 x4မှာ 4096 နှင့် 2160K x ။
MFT သို့မဟုတ် EF မှန်ဘီလူးတောင်ပေါ်နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့။
ရုပ်ရှင်ကြည့်ဘို့ dynamic range ကို၏ကျယ်ပြန့် 13 မှတ်တိုင်များ။
မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အနိမ့်အလင်းစွမ်းဆောင်မှုများအတွက် 25600 က ISO မှတက်။
60 fps သို့မဟုတ် 120 fps ပြတင်းပေါက်ဖွင့်မှတ်တမ်းအပြည့်အဝ resolution ကို။
SD, UHS-II နှင့် CFast ကဒ်အသံဖမျးအတွက်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အရည်အသွေးမြင့် Blackmagic RAW မှတ်တမ်းတင် Features ။
5 "touchscreen က built-in 6K ရိုက်ကူးသည့်အခါတိကျအာရုံခွင့်ပြုပါတယ်။
Blackmagic OS ကို URSA Mini နဲ့ URSA အသံလွှင့်ကင်မရာများအတွက်အသုံးပြုသည်။
Blackmagic မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ4အရောင်သိပ္ပံပါဝင်သည်။
အင်္ဂါရပ်များအပြည့်အဝအရွယ်အစား HDMI status ကိုပြသမှုနှင့်အတူစောင့်ကြည့်ဘို့။
48 ဗို့ Phantom ပါဝါနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ် mini ကို XLR input ကို။
USB မှတ်-C မှာ port ကိုပြင်ပ disk ကိုတိုက်ရိုက်မှတ်တမ်းတင်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ထပ်တူပြုခြင်း muli-ကင်မရာအညွန့်အဘို့ timecode မီးစက်တည်ဆောက်။
နေဆဲ-megapixel 21.2 အထိဖမ်းယူဘောင်ထောက်ပံ့ပေးသည်။
12V, DC input ကိုနဲ့ USB-C အမှတဆင့်အားသွင်းနိုင်ပါတယ်မှတဆင့်အင်အားကြီး။
post ကိုထုတ်လုပ်မှုများအတွက်အပြည့်အဝ DaVinci ဖြေရှင်းရန်စတူဒီယိုတို့ပါဝင်သည်။
Blackmagic Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 6K ထံမှတာဝန်များကိုဖယ်ထုတ်ပြီးအမေရိကန် $ 2,495 ယခုရရှိနိုင် Blackmagic ဒီဇိုင်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပြန်လည်ရောင်းချသူများ။
ကုန်ပစ္စည်းအဆိုပါ Blackmagic Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 6K ဓါတ်ပုံများအဖြစ်ရှိသမျှသည်အခြားသော Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်ကုန်မှာရရှိနိုင်ပါ www.blackmagicdesign.com/media/images ။
2015 Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida CES2017 တည်းဖြတ်ခြင်း FOR-တစ်ဦးက ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo JCT-VC ကို MStar ဆူညံသံလျော့ချခြင်း post ကိုထုတ်လုပ်မှု SJGolden - SoftAtHome လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ UHD / 4K / HD ကို မူကွဲစနစ်များ viarte ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် Warsaw ကို 2019-08-08
ယခင်: Aja သင်္ဘော Ki Pro ကို GO Multi-Channel ကို H.264 Recorder / Player ကို
နောက်တစ်ခု: Blackmagic ဒီဇိုင်းသစ် UltraStudio 4K Mini ကိုမိတ်ဆက်